क्षेत्रीको छोराले गरे अन्तरजातिय विवाह: गाउँमा भयो भब्य स्वागत, सासु-ससुरा खुसीले नाचे…….(भिडियो हेर्नुस्) – Khabar Patrika Np
क्षेत्रीको छोराले गरे अन्तरजातिय विवाह: गाउँमा भयो भब्य स्वागत, सासु-ससुरा खुसीले नाचे…….(भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २९, २०७८ समय: २३:२१:४७
काठमाडौ । अहिले पछिल्लो समय जातका आधारमा विभेद गर्ने क्रम घट्दो अवस्थामा छ । अन्तरजातिय विवाहलाई पनि परिवार र समाजले स्वीकार गर्न लागेका छन् । हालै क्षेत्रीको छोराले राईको छोरीलाई वेहुली बनाएर ल्याए छोराका बुवाआमाले सहर्ष स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुको यो उदाहरणले समाजलाई नै राम्रो संकेत दिएको छ । कतिपय समाजमा भने अन्तरजातिय सम्बन्धका कारण परिवार नै विग्रिएका घटना पनि छन् । तर समाजमा राम्रा उदाहरण पनि देखिन थालेका छन् ।
ताप्लेजुगं जिल्लामा पाथिभरा यागंवरा गाउँपालिकमा भएको यो विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । युवकले साथीका माध्यमवाट युवतीको फोन नम्बर पत्ता लगाएका थिए । पाँच दिनमा उनीहरुबीच प्रेम भयो अनि तत्काल विवाह गर्ने निर्णयमा पुगे । छोराले राईको छोरीलाई बुहारी बनाएर ल्याउँछु भनेर आमालाई सुनाए । आमाले उफ्रि उफ्रि ल्या भन्नु भयो त्यही भएर मैले ल्याएँ, छोराले विवाह पछि भने ।
क्षेत्रीको छोरासंग विवाह गरेर आएकी वेहुलीलाई आफ्नो माइतीले पनि विदाई गरेर पठाएको बताइन् । मेरो माइतीमा विदाई भइसक्यो, अहिले क्षेत्री परिवारमा आएपछि यता फेरी उहाँहरुको परम्परा अनुसार विवाह भयो खुसी लाग्यो, वेहुलीले भनिन् । राईको छोरी ल्याउँदा सबै खुसी छन्, सबै विवाहमा रमाएका छन्, वेहुलाले भने । साथीहरु पनि विवाह खान पाए झन खुसी छन्, उनले भने । मनकुमारी खड्काको छोराले राईको छोरी वुहारी बनाएर ल्याए पनि आफुलाई खुसी लागेको बताइन् ।
छोराले बेहुली ल्याउने मेरो लागि होइन, उसकै लागि हो उनीहरु खुसी छन् भने मलाई त किन दुखी हुनु र ? उनले भनिन्, मैले सहजै स्वीकार गरे, छोराले ल्याइसकेपछि अर्काकी छोरीलाई दुख दिन भएन ।